Posted on 08 / 29 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora Zvepabonde Zvinodhaka Poda. Izvo zvine 59 Comments.
Sildenafil citrate 171599-83-0 inoshandiswa kurapa erectile kusagadzikana uye pulmonary arterial hypertension (PPH). Sildenafil inogona kusarudzira PDE5 basa kuvanhu. PDE5 inonyatsoratidzwa munharaunda yepenisi uye yakadzika mune mamwe maviri uye nhengo. Mushure mokutora sildenafil, iyo corpus cavernosum vasomotor mushure inodzokorora pasi pekuita kwechirwere, ropa rekuwedzera rinowedzera, muviri weva cavernous wakazara, uye peni inogadziriswa, zvichidaro inobatsira kugadzirwa kwepenile erectile dysfunction.
Flibanserin 147359-76-0 imishonga yakatanga kugadzirirwa kurapwa kwekuora mwoyo, asi yakawanikwa isingabatsiri munharaunda iyi uye ikozvino yakagamuchirwa zvakare kuti kurapwa kwekunetseka kwepabonde kusagadzikana (HSDD) kuvakadzi - zvisinei, kubudirira hazvina kusimbiswa pano zvakatungamirira kumakakatanwa akawanda akakomba musoro we flibanserin (Addyi) uye zvinonzi zvaitika.
Kana iwe unotarisana nechinetso chekusimbisa, chirwere chepabonde chinogona kukubatsira kurwisana nacho. Mukuwedzera pakurwisana nechirwere ichi, uchawanawo hutano hunogutsa uye iwe unogona kugutsa mumwe wako usingatyi "kuputsika" panguva yechiito; chinorwadza uye chinonyadzisa pane imwe nguva.
Muhupenyu, pangave pane dzimwe nguva apo murume kana mukadzi asingachadi kurara nemurume wake. Dambudziko iri rinowanzoita zvepfungwa uye rinogona kuitika nekuda kwezvinhu zvakasiyana-siyana: kuneta, matambudziko evanhu, kushungurudzika ... Izvi zvinogona kukonzera kudonha mu libido uye kufara.
Mhinduro ye59 Comments
Sa PDE5 inhibitor, batsira kusimudzira kuyerera kweropa, moyo unodedera nekukurumidza ndiko kuratidzwa kwemhedzisiro.
Muchikamu chinosara, achagovera zvido zvemishonga yese yekushandisa zvinodhaka. inosanganisira kutaurirana kwemaidhafilfil, flibanserin kuwirirana kwemishonga ... nezvimwe.
Muchikamu chinosara, achagoverana mamwe mashoko ehuwandu hwezvinodhaka zvepabonde. Itaiwo mibare, migumisiro, kushandiswa ... nezvimwe.
Mune zvimwe zvepabonde kugovana zvinodhaka, vachawana mamwe mashoko. Kwete chete tadalafil madhara kana Flibanserin migumisiro, uye nhamba yeizivo ... nezvimwe.
Hazvirevi Viagra in powder form, chinhu chinoshanda cheViagra is sildenafil citrate powder
Ndabvunza murume wangu kana tikwanisa kuedza izvi zvinodhaka zvepabonde kamwechete munguva. Pane imwe nguva, ndakacherechedza kuti pakanga pane kuve nekusiyana kwatakaita panguva iyoyo yatakashandisa. Placebo zvichida, kana kungova nemigumisiro yayo. Asi zvakadaro, haisi chikamu chekuita zvepabonde kwezuva nezuva. Chero apo tinoda chimwe chinhu chakasiyana.
Somunhu, ini ndisati ndamboedza chero zvepabonde zvinodhaka, asi ini ndiri kuchengeta iyi nyaya yezvinangwa zvenguva yemberi. Kana zvingaita kuti ruzivo rwepabonde ruwedzere, saka handioni chikonzero chekusashandisa. Kunyange zvakadaro, ndinofunga kuti mishonga iyi inofanira kushandiswa mukuenzanisa kuitira kuti irege kuvimba nayo.
Izvi zvinodhaka zvepabonde zvakachengeteka here? Ndinovimba kuti havagoni kukonzera kuvimba. Pamusoro pezvose, kubvunza chiremba chiremba ndiyo inonyanya kukosha.
Zvakanaka kuti mishonga iyi inowanikwa kune varume nevakadzi. Inonzwika sehutano hwakanaka hunoitwa navanachiremba uye vanozvipira.
Zvakanaka kuti mishonga iyi ipo kuitira kuti vanhu vave nehupenyu hwehutano hwakanaka. Zvakanaka zvose zvinogadziriswa uye zvidziviriro zvakanyorwa.
dapoxetine inobatsira kuderedza ukama hwehukama hwevanhu hunogona kuva nehuchenjeri kuti uedze kune mumwe wako ane dambudziko rakakomba repabonde iri.
Zvinodhaka zvekuita zvepabonde zvakadai sezvizvi hazvishandi pachavo, zvinofanira kunge zviri kushanda nemushandisi uye zvinonyatsotaurwa pano kuti zvinoda kukurudzira kwemushandisi.
utibe09 / 23 / 2018 pa 12: 32 am
Ndinoziva kuti iyi yakanaka poda yezvinodhaka zvekuita zvepabonde kushandisa kushandiswa, asi zvingava zvakanaka zvakare kuti vatsanangurire zvimwe zvinokonzerwa nemigumisiro zvakare yekuchengetedza.
Nyaya yakawanda yemhuri yakabva kune varume vane mvura yekudiridza uye kusvibiswa kusati kwasvika. Zvakanaka kuti tine zvepabonde kuwedzera zvinodhaka zvakadai kuti tibate dambudziko iri.
Saka uri kutaura here kuti kuita zvepabonde kuderedza mishonga, viagra, iko zvino iri mufuremu? Mufaro! Iwe zvino uwane viagra nokuda kweti yako. Asi, ibata ndeyokuti hazvizogadziri maitiro ako, zvinongomisa bhisike yako kubva pakuderera hahahahaha.
Sexy Mack09 / 22 / 2018 pa 9: 19 pm
Icho ichokwadi here? Saka izvi zvinondiwana 15 zvese zvepabonde? Izvozvo zviito zvepabonde zvinoda kubhadharwa nemishonga.hahahah
Ini handina chokwadi chechokwadi nei ndiri pano asi, ini ndine chokwadi chekuziva chimwe chinhu nezve erectile matambudziko. Ndinoreva mushure mekuroorwa kwemakore akawanda murume wangu ave kutora ma supplements ekuwedzera mota yake. Dai aya aive achiri mazuva ekare aizozeza asi iye zvino atonhora nawo.
Ini handisi iyo yakasununguka pamishonga yekuita zvepabonde zvishoma kana iyo inosvika kumarimi. Zvinhu zvakasikwa seginseng zvinonyengera! Iyo chete nzira yandinoshandisa nayo iyi ndiyo apo ini ndakura. Hongu ndiri kunyatsofunga izvi.
Izvo zvinonzi PDE5 zvinokonzerwa neTadalafil uye zvakaitika zvinonakidza kubva kuvakadzi vanonzi Flibanserin vose vane chikonzero chakakwana kuti hutenderwe kutsvaga kubatsiridza kubatsira. Ndine chokwadi kuti pachava nemapoka akawanda anofarira chero yemishonga inoratidzwa muU.S. uye kune dzimwe nyika.
Migumisiro uye zvidzidzo zvechiremba zvinonzwika chaizvo. Upenyu hwepabonde hutano hwakakosha kune vakawanda uye ndinofara kuti mishonga iyi iri kugamuchirwa zvakanaka.
Zvakakosha kuti uwane ruzivo pamusoro pezvauri kupinda iwe usati wapinda muhomwe kana dare rekugezera rine baggie yakazara yechinhu. Kuti tibatsire kunze, takaputira nemishonga inoratidzira maforamu, akabatanidzwa pamusoro pezvipi zvidzidzo zvishoma zviriko, uye akabvunzurudza vanhu vakawanda-kubva kune vanhu vasingatauri kuenda kune vane psychonauts, kubva kune vanofarira amateur kunechiremba nemapfungwa-sezvatingaita kuisa pamwe chete zvose zvese zviri kunze uko pamusoro pehumping pamusoro pezvinodhaka.
Zvimwe zvepabonde zvinodhaka zvinogona kukuzarura kuti upedze ecstasy, asi vamwe vakakwana bhoner killers. Iwe unoti chirwere ichi, uye mumwe munhu anoti vanoda kuda kuita zvepabonde pairi.
nerly09 / 22 / 2018 pa 5: 45 am
Zvakanaka kuti mishonga yekuita zvepabonde yekuita zvepabonde ndeyemurume kana mukadzi.iyo inobatsira zvose zvepabonde kutengesa chero ipi zvayo ine zvepabonde ichave yakabatana nemumwe wemishonga iyi
Izvo zvichazobatsira kubatsira kumutsira humwe hukama hunofanirwa kunge hwave huripo nokuda kwezvinetso zvepabonde. vanodikanwa vanofanira kufanirwa pamusoro peizvi nekuda kwerumutsiriro.
Kuvimba nezvinodhaka zvepabonde zvinogona kuratidza kuti zvinouraya. Inogona kuita kuti munhu asanyanya kuva nechivimbo mukuita zvepabonde.
Zvinonakidza kuti mishonga iyi inowedzera kuita zvepabonde nekufadza. Tinoonga nekugovana.
Zvinofadza zvinowanikwa. Ndinogona kuziva kana pane zvimwe zvinetso kubva pakutora zvimwe zveTadalafil kana Flibanserin kupfuura zvakatemwa. Ndinotenda nekugovana!
Ndiri kufara kwazvo kuwana chinyorwa ichi, uye ndichakumbira murume wangu kuti averenge zvakare. Munhu wose anoda zvepabonde, hapana chikonzero chokunyara pamusoro peizvi. Ndinokutendai nekugovana ruzivo pamusoro pehutano hwepabonde muchikamu chino, zvinobatsira!
Ini neshamwari yangu tiri kutsvaga nzira dzokuita kuti hupenyu hwedu hwepabonde huwedzere kufadza. Aya madhiragi anonzwika seanokodzera kuedza. Ndatenda!
Iye zvino ndinoziva kuti ndezvipi zvinodhaka zvinoshandiswa kushandiswa pakuvandudza kuita zvepabonde munguva dzepedyo! Ndatenda, ida zvinyorwa zvako.
Ini handina kumbobvira ndine matambudziko neanousalal yangu kunze kweku kundiita horny kazhinji. Ini ndinofunga ndingangoda idzi PDE5 supplements mumakore mashoma asi haha.
Ini ndichakurudzira udenafil kubva pane izvo zvinoshandiswa nevanhu.Zvinhu zvakanaka pamusoro peizvi ndezvakaipa zvishoma. Saka zvakakurudzirwa kushandisa zvepabonde
Mufaro panguva yepabonde chinhu chakakosha kune vakaroorana uye vanogona kuita kana kurara hupenyu hwavo hwepabonde. Ndinovimba avo vasina kufara vanogona kushandisa madhiragi aya nekuda kwavo pachavo.
maka09 / 20 / 2018 pa 11: 34 pm
Ndinofarira kwawakaratidza kuti kana dambudziko repabonde risina kugadziriswa nemishonga iyi yepabonde, ipapo chiremba anofanira kubvunzurudzwa.Ndinofunga kuti icho chichava chinhu chakanaka chekuita mumamiriro ezvinhu akadaro.
Upenyu hwepabonde hwemumwe murume nemudzimai hwakafanana netambo inorarama yehukama chero hupi zvayo inofanirwa kuwedzerwa nguva nenguva. Ichaita zvakanaka kushandisa chero ipi zvayo yekusimudzira hukama hwehukama.
Mazuva ano izvi zvinodhaka zvepabonde zvinoshandiswa nevanhu vechidiki vane utano izvo zvinetso. Zvisinei, vakabatsira vanhu vakwegura uye vane chirwere cheEV kuti vadzokezve pane zvinokosha muupenyu hwavo.
Captain U09 / 20 / 2018 pa 10: 44 pm
Zvichida yava nguva yekutaura pamusoro pezvinhu izvi kunze pachena, zvinodhaka zvepabonde, kuita zvepabonde. Ndinoreva kuti kuita zvepabonde kunokosha zvakanyanya sezvazvinogona kuva dambudziko. Nezvo zvakati, ndinofara kuti nyaya idzi dziripo. Vanhu vashoma vanogamuchira zvishoma nezvishoma izvi.
Mach09 / 20 / 2018 pa 9: 46 pm
Iko kupi iri muHupf specs zvakadaro? Ndinoreva zvakanyanya? Ndekupi izvo zvikamu uye zvinhu? Ndinoreva chimwe chinhu chaunofunga, Kuziva izvo zvinouya mukuverenga.
Inonzwika sechirongwa chakachengetedzwa uye chakachengeteka chekushandisa zvepabonde. Ndinenge ndichida kuziva kuti ndezvipi zvinodhaka kana kuti zvinowedzera kusatora panguva yekushandisa Tadalafil kana Flibanserin. Tinoonga nekugovana.
Horray for advanced libido! Dyclonin uye flibanserin inonzwika sezvisungo zvine simba zvekuita zvepabonde zviri nani. Tinoonga nekugovana.
Zivo isimba, chero ipi zvayo inogona kutora. Ndinofanira kunge ndichitsvaga chero rupiro rwekukurudzira kuita kuti hutano hwepabonde huwedzere kunakidza, ini zvino ndinoziva kuti ndotorei.
Iyi ndiyo nyaya inofadza kuverenga ... :). Ndakatomboedza kushandisa izvi-kungobva kunze kwechido. Uye pachena, handiri kufara chaizvo ... Ndinofunga kuti mwoyo wangu uri kukurumidza kukurumidza uye unonzwa usina kunetseka mumusoro mangu.
Avanafil akandibatsira chaizvo. Ndakapotsa ndanetseka pandakazoita nehutano hwangu hwepabonde, uye ndinoonga kuti ndakanga ndarayirwa avanafil.
Ndakashandisa sildenafil citrate pandakanga ndine dambudziko. Zvakatora nguva, asi zvakange zvichinyatsobudirira.
Hi shamwari, icho chikuru chikuru cheViagra iSildenafil citrate, CAS 171599-83-0, unogona kuwana tsanangudzo iri pasi apa tadalafil CAS 171596-29-5.
Ndine chokwadi kuti varume vane chirwere chisati chasvika vangave vasingafungi kuedza Vardenafil kunze kwechirwere chinogona kukurumidza kuwedzera penile erectile kushanda uye kubatsira kubwinya uye nguva yehutano.
Ini ndinongo tarira vanhurume vane erectile dysfunction vanowana kuverenga Sildenafil citrate kuitira kuti vatenge kuvabatsira kuti vadzore erection yavo.Zvakakosha pakurarama kwakanaka pabonde.
Handizive kuti nei ndichiverenga izvi. haha. Asi ruzivo rwakanyanya nezvenyaya iyi. Ingo ita chokwadi chekubvunza nyanzvi usati watora chero zvinodhaka zvepabonde.
Ini mazano ekutaurira chiremba wako kutanga usati watora imwe yemishonga iyi yepabonde. Ndinoreva kuti ndinowanzoverenga nhau apo mumwe munhu anofa nekuda kweizvi. Kubuda kunze ne bang literally.
Nenzira Handidi Izvo. YET uye netariro haichazovi. Kunyange zvakadaro, ndiri kushamisika Viagra haisi pano.
mucheche09 / 19 / 2018 pa 7: 05 pm
8 inoita zvepabonde zvinodhaka zvepabonde, izvi zvinopa imwe pfungwa yekuzvisarudzira uye inoshanda zvakazara nechisarudzo.Kutora chido chepabonde kumashure kunokosha zvikuru uye iyi pfupa ichabatsira zvechokwadi.
Iyi ndiyo nzvimbo inotyisa, vakaroorana vachawana izvi zvakashamisa kuti vawedzere hupenyu hwavo hwepabonde. Ini pachedu ndinoda ruzivo urwu uye ndinotarisa kushandisa chero ani zvake angave akakodzera purogiramu yangu. Iyi ruzivo yakakodzera nguva, inogona kutenga cialis pasina mishonga.
Landen Burrows09 / 19 / 2018 pa 5: 10 pm
Ini ndichava nechokwadi chekukurudzira izvi kune shamwari dzepabonde uye vanoda kuwedzera chido chepabonde! Tinoonga nekugovana.
Izvi zvinoratidzika semishonga inobatsira yekusimudzira hupenyu hwako hwepabonde, uye kuziva kuti zvinodhaka zvinokuitirei. Ndinotenda nekugovana!
Ndinofunga kuti zvinodhaka zvepabonde zvakadai zvinogona kukonzera kuzvidzora, uye kuita kuti isu tisave tisina chivimbo kana tisingashandisi. Asi zvichida zvinogona kuva zvakanaka kana usingashandisi izvi kakawanda, Zvishoma zvishoma.
Zvechokwadi handina kana pfungwa pamusoro pezvinodhaka, zvekare zvekuita zvepabonde zvinodhaka. Uye ivo vanobatsira chaizvo nekuita zvepabonde?
Wow, ndakanga ndisingazivi kuti kune mishonga yakasiyana yepabonde kune varume nevakadzi. Izvo zvinonakidza kuverenga!
Ndinovimba avo avo vanonyatsoda ruzivo urwu kuti vawane kuverenga nyaya ino. Ndinofunga kuti izvi zvekuita zvepabonde zvichange zvichinyanya kubatsira nokuti zvinobatsira kukurudzira ukama huri pakati pevakaroorana.
Iyi inokosha kwazvo. Zvimwe zvinetso zvakabvarura mhuri zvakasiyana uye zvakakosha kuti zvimwe zvinodhaka zvepabonde zvakanaka zvakadai zvinofanira kuenzaniswa uye kutorwa kuti zvigadziriswe. Zvinotyisa kuti mishonga iyi inogona kubatsira kusimbisa libido.
MAGL inhibitor uye FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750 I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika we2018